Technorati ဖြင့်ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုရှာဖွေခြင်း Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 28, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Technorati သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးမည်မျှကောင်းမွန်စွာရောင်းချနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ငါကြိုက်နှစ်သက်သည့်အင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာအချို့သောဘလော့ဂ်များကိုရှာဖွေရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ငါအချို့ရှာဖွေမှုများကိုစာရင်းသွင်း။
ကိုသွားပါ http://www.technorati.com/tag နှင့်ဤနာရီသည်သင် top tags ကိုရှာဖွေနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေရေးစကားလုံးများကိုရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ ရလဒ် URL ကို ဤကဲ့သို့သောပုံသည် http://www.technorati.com/posts/tag/adobe+apollo (Adobe Apollo ကိုရှာဖွေလျှင်) ဖြစ်သည်။
သင်သတိထားမိပါကသင်အမှန်တကယ်၎င်းကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည် RSS ကို အခုအစာကျွေးပါ တူစာဖတ်သူကိုအသုံးပြုခြင်း Google Readerသင်သည်“ Adobe Apollo” ပေါ်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်ဘလော့ဂ်များသို့မဟုတ်၎င်းတို့တင်လိုက်သောမည်သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုမဆိုအများဆုံးရနိုင်သည်။ ၎င်းသည် blogosphere တစ်ခုလုံးအတွက်သတိပေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှာရန်ဖြစ်သည် ကြိုတင် အကြောင်း blogging ရန်။ ၎င်းသည်သင်၏ပါဝင်မှုကိုခိုင်မာသည့်ကိုးကားချက်များနှင့်ပေးနိုင်သည် trackBacks!
28:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 3, 10 တွင်
ကြင်နာသောစကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းကိုငါကြိုက်တာကို ၀ မ်းသာပါတယ်။ သူတစ်ပါးကိုအသိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ 29, 2006 မှာ 11: 01 AM
Technorati ကိုငါ့ဘလော့ဂ်ကိုမွမ်းမံနိုင်သေးတယ်။ ငါနေ့အဘို့ထိုသူတို့ pinging ခဲ့ ~! နည်းပညာအထောက်အပံ့အတွက်မူအောင်မြင်မှုကဲ့သို့ဘာမျှမအောင်မြင်ပါ -
“ တစ်ပတ်အတွင်းမှာဘယ်သူ့ကိုမှမကြားဘူးဆိုရင် Support ကိုနောက်ကျကျန်နေသေးလို့တောင်းပန်တာကိုတောင်းပန်ပါ။
ဒီဇင်ဘာ 29, 2006 မှာ 11: 12 AM
အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တုန်းကငါ Technorati နဲ့လပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့သမိုင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ခဏကြာပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒါကိုပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်တွေအားလုံးဒီအဖြစ်အပျက်ကိုဖြစ်ပျက်ရမယ်၊ အဲဒါတွေကိုပြင်ဖို့သူတို့ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး။ ဘလော့ဂ်တွေကိုသူတို့ထဲကနေဖျက်ပစ်ပြီးအစကနေပြန်စခဲ့တယ်။ အလုပ်မလုပ်ဘူး။ သူတို့ကဆဲလ်ယန္တရားအချို့ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 29, 2006 မှာ 11: 17 AM
အင်းငါလည်းပဲ နာကျင်မှုကြီးထွားလာတာဖြစ်နိုင်တယ် ငါသတင်းအချက်အလက် Overload ခံစားနေရပြီးငါသိတယ်!
[ဦး နှောက်သည်နာကျင်သည်။ လိုအပ်သည် ... ချောကလက်!]
29:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 54 တွင်
Vince၊ Doug ၏ဘလော့မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ခဲ့ရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်တွင်သင်၏ဘလော့ဂ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
တနည်းကား, ထိုအကြောင်းစိတ်မကောင်း။ Dorion
29:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 31 တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Dorion !!!
29:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 37 တွင်
သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အလိုအလျောက်အကြောင်းပြောဆို! အခုဘယ် Cialdini မင်းသားမင်းသမီးကဒီကိုမောင်း?
29:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 8, 50 တွင်
ဒါကလူတွေ၊ လူတွေနဲ့စကားပြောတာ၊ အီးမေးလ်နည်းနည်းပဲလို့ပြောကြပါစို့ (ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များမှအလိုအလျောက်) ။
29:2006 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 15 တွင်